Dowladda Soomaaliya oo Cambaaraysay weerakii argagixiso ee Manda Bay – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dowladda Soomaaliya oo Cambaaraysay weerakii argagixiso ee Manda Bay
Dowladda Soomaaliya oo Cambaaraysay weerakii argagixiso ee Manda Bay
War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa canbaarayn dusha looga tuuray weerarkii kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada Mareykanka ee Manda Bay ee gobolka Lamu ee dalka Kenya.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ciidamada Kenya iyo taliska AFRICOM ee Mareykanka ku amaanayso sida fudud ee ay isaga caabiyeen weerarkaas, khasaaraha xooganna u gaarsiiyeen argagixisada Al-Shabaab.
Taliska ciidamada Mareykanka Africa ee AFRICOM ayaa sheegay in war-saxaafadeedyo dhowr ah oo Al-Shabaab ay kasoo saartay dhacdadan ay yihiin kuwa lagu buun-buuninayo xaaladda amniga ee saldhigga. “Dhaqankan waa mid caadi u ah ururkaan argagixiso.” Sidaas waxaa yiri agaasimaha howl-gallada AFRICOM Major General William Gayler.
Qaar ka mid ah odhaahyada Sh.Mustafe XAAJI Ismail
Dhismaha wajigii koowaad ee Dekeda Berbera ayaa ku dhaw dhamaad amb....